HomeWararka CiyaarahaReal Madrid oo halis ugu jirta inay seegto Helitaanka Erling Braut Haaland
October 17, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inaysan haatan booska Erling Braut Haaland u taagnayn , iyadoo xiisaha weeraryahanka Borussia Dortmund uu sii kordhayo.
Xiddiga reer Norway ayaa si weyn loo filayaa inuu ka tago BVB inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga soo aadan, waxaana la rumeysan yahay in kooxo badan oo ay ka mid yihiin Manchester United , Manchester City , Bayern Munich iyo Chelsea ay isku diyaarinayaan inay u tartamaan adeegiisa.
Real Madrid ayaa loo maleynayay inay tahay madaxa safka 21 jirka, laakiin sida laga soo xigtay AS , weeraryahanka ayaa ‘bilaabaya inuu iska dhaafo fursadaha uu ugu biiro karo kooxda reer Spain.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Newcastle United iyo Paris Saint-Germain ay sidoo kale ku biireen loolanka Haaland, taasoo la micno ah in Carlo Ancelotti uu dagaal culus wajahayo si ay ugu guuleysato tartanka saxiixiisa.
Xidiga reer Norway ayaa mar kale qaab ciyaareed aad u weyn ku bilowday ololihii 2021-22, isagoo dhaliyay 13 jeer isla markaana diiwaangeliyay afar caawin sagaal kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.